Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Ghana: Ugbu a, onye otu ndị isi na Board of Africa Tourism Board
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Ghana: Ugbu a, onye otu ndị isi na Board of Africa Tourism Board
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Hon-Catherine-Ablema-Afeku-onye isi oche-African-Tourism-Board
Hon. Catherine Ablema Afeku, Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya na Ghana, sonyeere ndị njem njem nlegharị anya n'Africa (ATB) n'oge na-adịbeghị anya.
Ntọala na 2018 dị ka ọrụ nke International Coalition of Tourism Partners (ICTP), ndị African Tourism Board bụ njikọ a toro na mba ụwa maka ịme dị ka ihe mkpalite maka mmepe ọrụ nke njem na njem na mpaghara Africa.
Hon. Afeku bu onye otu New Patriotic Party na onye otu nzuko omeiwu maka Evalue Gwira Constituency na Western Region.
Amuru ya na Axim ma nweta asambodo nke nzere ochichi nke Master of Keller Graduate School of Management nke DeVry University di na Atlanta, Georgia, USA, na aho 2000.
Ndi otu ndi njem nlere anya nke ndi Afrika na-enye ndi otu ya nkwado, nyocha miri emi na ihe ohuru. Na mmekorita ya na ndi otu ndi otu na ndi mmadu, ATB na-eme ka onu ogugu, uru, na ogo nke njem na njem gaa, site na, na n'ime Africa.
Mkpakọrịta ahụ na-enye nduzi na ndụmọdụ banyere otu onye na mkpokọta otu ndị otu nọ na ya ma na-agbasawanye maka ohere maka ịre ahịa, mmekọrịta ọha na eze, itinye ego, itinye aha, ịkwalite, na ịtọlite ​​ahịa dị iche iche.
ATB na-esonye na nzukọ nchekwa njem nleta na ahụike na mba ndị otu, PR na ahịa, mgbasa ozi, mgbasa ozi ahia, ngosipụta okporo ụzọ, webinars, na MICE Africa.
Ebumnuche gọọmentị nke nzukọ a na-ezube maka afọ a.
Iji mụtakwuo banyere Kọmitii Njem Nleta Africa, otu esi esonye ma sonye, pịa ebe a.